ငလုံးရခိုင်​သတင်းစုစည်းမှူ (v4.0) | ngalone
ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှတွင် ဟိန္ဒူဘုရားရှိခိုးကျောင်း ၁၅ ကျောင်းနှင့် အိမ်ပေါင်း ၁၀၀ ထက်မနည်း တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးခံရ →
Android ဖုန်းကနီ ရခိုင်နဲ့ ပြည်တွင်းသတင်းတိ ဖတ်ဖို့ ငလုံးရခိုင်​သတင်းစုစည်းမှူ (v4.0) ကိုတင်​ပီးလိုက်​ပါ​ရေ။ အယင်​ version အ​ဟောင်းကိုမဖြုတ်​ပဲ​ဒေချင့်​ကို တင်​လိုက်​ပါ။ ​ဘောလုံးစိတ်​၀င်​စား​ရေလူတိအတွက်​ ​ဘောလုံးသတင်းတိပါ ထည့်​ပီးလိုက်​ပါယင့်​။
Facebook သုံးရေလူတိ ကျွန်တော်ရို့ http://facebook.com/ArakanBloodNews ကို Like လုပ်ပနာ သတင်းတိကို Facebook ကနီဖတ်နိုင်ပါရေ။
This entry was posted in အထွေထွေ. Bookmark the permalink.	← ကျောက်ဖြူသတင်း